डिभिजन २ क्रिकेटः नेपालका बलरहरु लगातार युएईका ब्याट्सम्यानको धुलाई खाँदै
काठमाडौँ । अईसीसी विश्व किर्केट लिग डिभिजन २ क्रिकेटमा नेपाललाई युएईले पूर्णरुपले दवाबमा राखेको छ । नेपालका बलरहरु लगातार युएईका ब्याट्सम्यानको धुलाई खाईरहेका छन् ।
अहिले युएईले नकै राम्रो लयमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेपालका बलर आजको खेलमा निकै निरिह देखिएका छन्। युएईका लागि ओप्निङ्ग ब्याटिंगमा आएका रोहन मुस्तफाले ९९ बलमा अर्धशतकिय ५१ रनको परी खेल्दै बसन्त रेग्मीको बलमा आउट भएका थिए भने उनिसंगै आएका अर्का ओपनर अश्फक अहमदले अहिले पनि क्रिजमा डटीरहेका छन्। उनले ११२ बलमा १०२ रनको सतकीय पारी खेलिरहेका छन्।
अहिले ४० ओभरको खेल सकिँदा युएईको स्कोर १९० भैसकेको छ। सरसर्ती हेर्दा आजको खेल नेपालको कोल्टाबाट युएईतर्फ लागेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालको पूर्णरुपले फ्लप ब्याटिंग लाइअपले २०० रनको लक्ष्य समेत थेग्न नसक्ने अवस्था छ। तर, युएईको अहिलेको ब्याटिंगलाई हेर्दा २५० भन्दा माथिको टार्गेट नेपालले सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ, जुन नेपालको लागि असम्भवप्राय: देखिन्छ।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन ०३, २०७४१६:१४
नेपाललाई तस्रो सफलता: सन्दिप हटाए नेपालको ‘तगारो’, ११४ रन बनाएका अहमद आउट !
निर्माणाधीन रिसोर्टमा २ जना कामदारको हत्या
‘लाम्पार्ड मेरा लागि उत्कृष्ट’– ड्रोग्बा
एमालेबाट को-को बने समानुपातिक सांसद ? (सूचीसहित)
निकै आक्रामक अन्दाजमा देखिएका पारस खड्का २० रन बनाउदै आउट